ဗုဒ္ဓသာသနရံသီ (ဂျာမနီ) အသင်း: May 2014
သာသနာ့ဒါယကာ ဒါယိကာမများ ကြည်သာရွှင်ပြ သာဓု နုမောဒန ခေါ်ဆိုနိုင်ကြပါစေ
စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ အလှူရှင် Mr. Ivan Terry Tom နှင့် Ms Asuley Chan တို့မှ မိခင်ကြီး Cheumg Pul Yong အားအမှူးထား၍ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ လန်ဒန်မြို့တွင် တည်ဆောက်မည့် သာသနရံသီမြန်မာ့ဗုဒ္ဓစင်တာတည်ဆောက်ရေးအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတိတိကို ရန်ကုန်မြို မဟာသန္တိသုခကျောင်းတော်သို့လာရောက်၍ လန်ဒန်မြို့ သာသနာ့ရံသီဆရာတော် ဦးဥတ္တရအား လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။
ဂျာမနီသာသနာ့ရံသီ သာသနာ့ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ ဝမ်းမြောက်နုမော် သာဓု,သာဓု,သာဓု ခေါ်ဆိုပါသည်။
ဒုတိယဖြူးဆရာတော် ၏ ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ
ပထမဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တနရပတိ၏ ဩဝါဒ သာသနာပြု လမ်းစဉ်အရ,,,ဒုတိယ ဖြူးဆရာတော် (ရန်ကုန်မြို့,လှိုင်မြို့နယ် ဓမ္မရက္ခိတဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းတိုက် , မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကျောက်ရေတွင်းမြောက်ပိုင်း ရတနာစိန်စည်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် , ဖြူးမြို့ ဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းတိုက်) တို့၏ ပဓာန နာယကဆရာတော် ဒေါက်တာအဂ္ဂဝရ (ဓမ္မာစရိယ၊M.A.,Ph.D) အရှင်သူမြတ်၏ ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲကို ၂၅.မေလ.တနင်္ဂနွေနေ့တွင် Frankfurt Bornheim Mitte Saalbau ခန်းမ၌ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တရား၌ပျော်ရွှင် ဓမ္မသူတော်စင်အပေါင်းတို့မှ အောက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ်အတိုင်း ကြွရောက်၍ သောကငြိမ်းအေးအမြိုက်ဆေးတရားတော်များ နာကြားနိုင်ပါစေကြောင်း ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ သာသနာ့ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ လေးမြတ်သောစိတ်ထားဖြင့်ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
နေရက် ။ ။ ၂၅. ၀၅. ၂၀၁၄ (တနင်္ဂနွေနေ့)
အစီအစဉ်။ ။ သဒ္ဓါကြည်လင် ဆွမ်းအလှူ့ရှင်တို့ ညီတူမျှဝေ ဆွမ်းအလှူ ကုသိုဟ်ရပါစေကြောင်းဖြင့် နံနက် ၁၁.၀၀ နာရီ တိတိအချိန်၌ ကြွရောက်လာမည့် သံဃာတော်တို့အား နေ့ဆွမ်းစုပေါင်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ပါ၍ ကုသိုဟ်ပါဝင်လိုကြသည့် ဆွမ်းအလှူရှင်တို့အနေဖြင့် မိမိတို့တပိုင်တနိုင် ဆွမ်း,ဆွမ်းဟင်း,ခဲဖွယ်ချိုချင်ပွဲ တို့ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ဆွမ်းစုပေါင်းကပ်လှူကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ သံဃာတော်တို့ဆွမ်းစားပြီးပါက ကြွရောက်သည့်ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဧည့်ပရိတ်သတ်တို့အား ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီ သာသနာ့ဒါယကာ,ဒါယိကာမများမှ အုန်းထမင်း,ကြက်သားဟင်း,အချဉ်သုပ်စုံ,မြန်မာ့ရိုးရာ မုန့်,အဖျော်အချိုရည်တို့ဖြင့် လှူဒါန်းဧည့်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ မွန်းလွဲ ၁၃.၃၀ နာရီ၌ ဓမ္မပူဇော်ပွဲသဘင် အခမ်းအနားအစီအစဉ်စတင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
နေရာ။ ။ SAALBAU Bornheim
လမ်းညွှန်။ ။Frankfurt Hauptbahnhof (oder) Konstarblerwache မှ U4ဖြင့် Richtung Enkheim (oder) Sechbacher Landstraße သို့စီး၍ Höhen Straße မှတ်တိုင်၌ဆင်းပါ။ မြေအောက်ဘူတာမှ အပေါ်သို့ Berger Straße ဘက်ခြမ်းလမ်းညွှန်ချက်တိုင်းတက်၍ လမ်းပေါ်၌ Saalbau Bornheim သို့လမ်းညွှန်ပြထားမှူ့များအတိုင်း ရောတ်ရှိနိုင်ပါသည်။
နဝမမြောက် ဗန်းမော်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် ဒုတိယဖြူးဆရာတော်တို့၏ သာသနာရေးကြိုးပမ်းမှူ့များ
ဒေါက်တာ ဘဒ္ဒန္တ ကုမာရာဘိဝံသ, ဓမ္မရက္ခိတဖြူးမဟာစည်ရိပ်သာကျောင်းတိုက်သို့ကြွရောက်,တရားရေအေးတိုက်ကြွေး၍ , ဖြူးဆရာတော်၏ သာသနာပြူ့လုပ်ငန်းစဉ်များအား ထောက်ပံ့အားပေးတော်မူခဲ့ပါသည်။
Germany နိုင်ငံသို့ သာသနာပြူ့ခရီးစဉ် ကြွရောက်နေသော ဒုတိယဖြူးဆရာတော် ဒေါက်တာအဂ္ဂဝရ အားဦးထိပ်ထား၍ ဗုဒ္ဓသာသနာ့ရံသီအသင်းနှင့် Germany နိုင်ငံရောက် သာသနာ့ဒါယကာ, ဒါယိကာမများစုပေါင်းကျင်းပသော ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲ
ပထမဖြူးဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တနရပတိ၏ ဩဝါဒ သာသနာပြု လမ်းစဉ်အရ,,,ဒုတိယ ဖြူးဆရာတော် (ရန်ကုန်မြို့,လှိုင်မြို့နယ် ဓမ္မရက္ခိတဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းတိုက် , မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ကျောက်ရေတွင်းမြောက်ပိုင်း ရတနာစိန်စည်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် , ဖြူးမြို့ ဖြူးမဟာစည်သာသနာ့ရိပ်သာကျောင်းတိုက်) တို့၏ ပဓာန နာယကဆရာတော် ဒေါက်တာအဂ္ဂဝရ (ဓမ္မာစရိယ၊M.A.,Ph.D) အရှင်သူမြတ်သည် ၉ ရက်၊မေလ မှ ၆ရက်၊ဇွန်လထိ ဂျာမနီ နှင့် ဥရောပနိုင်ငံများသို့ သာသနာပြူ့ခရီးစဉ် ကြွရောက်လျှက်ရှိပါသည်။ ယခု ဆရာတော်ဘုရားသည် ဂျာမနီနိုင်ငံတွင်းခရီးစဉ်ကြွရောက်နေပြီး ၂၃ ရက်၊မေလ Freitag ညနေပိုင်း၌ Frankfurt သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ၍ ဦးသိန်းယု - ဒေါ်ချစ် မိသားစုနေအိမ်၌ ခေတ္တတည်းခို သီတင်းသုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဆရာတော်အရှင်သူမြတ်သည် ၂၅ ရက်၊မေလ Sonntag ၌ Frankfurt, Bornheim Mitte, Saarbau ခန်းမ၌ တရားရေအေးအမြိုက်ဆေး တိုက်ကျွေးဟောကြားတော်မူမည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကြုံခဲလှစွာသော ဓမ္မသဘင်ပူဇော်ပွဲသို့ Frankfurt မြို့ပေါ်နှင့် အနီးပါတ်ဝန်းကျင်နေ ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့မှ ကြွရောက်၍ တရား နာကြားပူဇော်နိုင်ကြပါကြောင်း လေးမြတ်စွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။